Jereo hoe ahoana no hanaovana ny ankamaroan'ny lavarangana kely misy anao | Bezzia
Araraoty tsara ny lavarangana misy anao
Susana Garcia | | Decor, Haingon-trano fitaka
La faritra balkon dia toerana ivelany izany dia afaka manome lalao maro antsika raha haintsika ny manararaotra azy. Ho hitantsika ny hevitra vitsivitsy hanararaotana ny lavarangana, io faritra io izay mitondra fikitihana ivelany amin'ny gorodona mihidy ary nanome toerana hialana sasatra amin'ny fotoana maro. Betsaka ny olona tsy mankafy an'io faritra kely ivelany io raha mendrika.
Ho hitantsika eo hevitra haingon-trano vitsivitsy mba hahazoana tombony betsaka amin'ny lavarangana misy antsika. Ity faritra ity dia tsara hamoronana toerana fialan-tsasatra na faritra voajanahary tanteraka. Ankafizo ny mandoko ny tranonao mba hahatonga azy io ho toerana mahafinaritra sy miasa tanteraka. Satria ny lavarangana dia faritra iray hafa izay mety tena ilaina.
1 Aforeto fanaka hanararaotana ny lavarangana
2 Manampia zavamaniry betsaka
3 Ny hazo sy ny zavamaniry dia mamorona tontolo voajanahary
4 Manana banky fitahirizana izy io
5 Teknolojia ho an'ny lavarangana
6 Jiro kely
Aforeto fanaka hanararaotana ny lavarangana
Iray amin'ireo zavatra azontsika atao ampiasaina ao amin'ny faritry ny lavarangana ny fanaka aforitra. Ity karazana fanaka ity dia tsy dia mipetraka loatra ary manana tombony lehibe fa raha ratsy ny andro dia azontsika atao ny mitahiry azy ireo eo an-joron'ny efitrano fandraisam-bahiny. Izy ireo no safidy tsara indrindra ho an'ny lavarangana kely sy tery, satria amin'ity fomba ity dia azontsika atao ny manala azy ireo tsy misy fiezahana be loatra ary mitahiry azy ireo eo an-jorony mandra-pahatongantsika azy ireo indray. Misy karazana fanaka mivalona maro amin'ny fitaovana toy ny hazo na vy. Ankoatr'izay, ity karazana fanaka ivelany ity dia manana vidiny tena lafo.
Manampia zavamaniry betsaka
ny zava-dehibe iray hafa koa ny zavamaniry eo amin'ny lavarangana misy antsika. Miaraka amin'izy ireo isika manome fiainana ny lavarangana, mameno azy io amin'ny loko ary ataontsika voajanahary kokoa ihany koa ny zava-drehetra. Toy ny hoe afaka manana sombin-javatra ivelany isika ao an-tranontsika na ao amin'ny trano fonenanay raha tsy misy zaridaina. Afaka mamboly zavamaniry manitra aza isika hampiasaina ao an-dakozia toy ny rosemary. Hevitra ho an'ny zavamaniry ny fampiasana vilany mitsangana, satria amin'izany fomba izany dia tsy handray toerana eny amin'ny lavarangana misy vilany lehibe isika.
Ny hazo sy ny zavamaniry dia mamorona tontolo voajanahary
Betsaka ny olona maniry mamorona lavarangana misy fikitika voajanahary, entanin'ny natiora. Amin'izany dia tokony hampiasa fitaovana voajanahary toy ny wicker sy hazo betsaka isika. Ao amin'ity lavarangana ity no ahitantsika an'io hevitra io miaraka amina tononkira fototra amin'ny lamba, ny hafanan'ny hazo ary ny zavamaniry maro izay manome voajanahary bebe kokoa amin'ny zava-drehetra. Tsy isalasalana fa iray amin'ireo balconies izay tena tianay.
Manana banky fitahirizana izy io
El ny fitehirizana dia teboka manan-danja ihany koa amin'ireo lavarangana kely indrindra. Izany no antony manampy ny manampy dabilio fitehirizana. Ireo dabilio ireo dia ampiasaina hipetrahana, noho izany dia mitahiry fanaka iray izahay, ary eo ambaniny dia mamela toerana hitahirizana zavatra izy ireo. Tsara izy ireo satria mamela antsika hitahiry lamba na kojakoja handaminana mora ny zavamaniry amin'ny zoro iray ary tsy ho very toerana. Ity koa dia manana kodiarana, izay manamora ny famindrantsika azy amin'ny lafiny iray mankany amin'ny ilany hafa.
Teknolojia ho an'ny lavarangana
ny Ny lavarangana Cozier dia mampiasa lamba farany foana. Marina fa afaka mamoaka azy ireo isika rehefa tsara ny andro mba tsy hanimbana azy ireo, fa ity karazana lamba ity dia ahafahantsika mahazo aina kokoa eo amin'ny lavarangana. Misafidiana cushion tsara ho an'ny seza na dabilio, lamba firakotra vitsivitsy ho an'ny andro mangatsiaka ary hanana ny lavarangana tonga lafatra ianao.
Raha mila araraoty tsara ny lavarangana misy antsikaTokony ho toerana azontsika ampiasaina amin'ny alina ihany koa izany na rehefa milentika ny masoandro. Noho izany dia mila jiro kely isika. Ny olona sasany misafidy labozia sasany hamoronana atmosfera fa afaka mampiasa garland koa ianao izay miasa miaraka amin'ny bateria vitsivitsy ary manome hazavana kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Araraoty tsara ny lavarangana misy anao
Maninona no zava-dehibe ny fahitana psikology mpivady
Fomba fampiononana miaraka amin'ny pataloha fotsy amin'ny lohataona